गोरखाका द्वन्द्वपीडितका हकदारले पाए तीन करोडभन्दा बढी रकम
गोरखा, साउन ३
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,गोरखाले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विभिन्न कारणले पीडित बनेका परिवारलाई रू‍. तीन करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरेको छ । कार्यालयले जिल्लामा स्थायी घर ठेगाना भएका सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार, बेपत्ता भएका व्यक्तिका नजिकका हकदार र विस्थापित परिवारका सदस्यलाई रू‍. तीन करोड दुई लाख २५ हजार चार सय ५० राहत वितरण गरेको हो ।
यसअघि विभिन्न चरणमा रू‍. पाँच लाख राहत बुझेका बेपत्ता भएका व्यक्ति र मृतकका हकदारलाई यस पटक रू‍.पाँच लाख थप गरी रू‍. १० लाख पुर्‍याइएको छ । त्यसै गरी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मीका हकदारले यसअघि विभिन्न चरणमा रू‍.आठ लाख ५० हजार राहत बुझिसकेकामा यस पटक रू‍.एक लाख ५० हजार थप गरी रू‍.१० लाख पुर्‍याइएको सहायक प्रजिअ प्रवीण ढकालले जानकारी दिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गोरखाबाट दुई जना बेपत्ता भएका थिए । उनीहरुका परिवारलाई रू‍.१० लाख प्रदान गरिसकिएको छ । सुरक्षाकर्मीसहित सर्वसाधारण गरी मृत्यु भएका ८४ जनाको परिवारलाई अन्तिम पटक रू‍.एक लाख ५० हजार दरले वितरण गरिएको बताइएको छ ।
द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न कारणले २२ घरपरिवारका ८४ सदस्य विस्थापित थिए । उनीहरुलाई प्रतिपरिवार रू‍.२५ हजारका दरले वितरण गरिएको बताइएको छ । रासस
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ३, २०७४, ०२:३४:४६